Tamin'ny andro taloha, ny Ejiptianina dia namorona ny fitsapana ny fitondrana vohoka sy ny fanabeazana aizana - Afrikhepri Fondation
Ny fimailo vita amin'ny lamba rongony, atete amin'ny menaka oliva
Tamin'ny andro taloha, ny egyptiana dia namorona ny fitsapana ny fitondrana vohoka sy ny fanabeazana aizana
Mety manahy momba ity fitsapana ity ianao saingy misy tokoa izany. Tsy taona an'arivony lasa izay no nahitan'ireto olon-tsotra ireto ny fomba fitsaboana voajanahary mba hanasitranana ny aretina rehetra amin'ny alàlan'ny herbal, ny zava-maniry, ny sakafo mifangaro ... saingy toa hita koa fa nahita fitsapana ho an'ny bevohoka izy ireo trano izay tena miasa
Ahoana no fomba hanaovana azy io?
Ny fomba tsotra dia tsotra. Mametraka varimbazaha sy vary orza ao anaty kaopy izahay, ilay vehivavy voakasik'izany dia manondraka ireny voa ireny, manarona ilay kaopy amin'ny lamba ary miverina hahita ny ampitson'iny. Raha nitsiry ny voany dia bevohoka izy ary raha tsy nitsiry dia tsy izy. Nolazain'izy ireo mihitsy aza fa afaka ny mamaritra raha ankizilahy na ankizivavy raha toa ny vary orza na ny varimbazaha izay niroborobo indrindra. Ny mpikaroka notsapaina tamin'ny 60 teknika ity taona ary nahita fa marina ny 70%.
Ity teknika ity dia toa marina tsara toy ny teknika ankehitriny, indrindra rehefa misy fitsapana bevohoka mora vidy. Ity fitsapana taloha ity dia miasa amin'ny foto-kevitra mitovy amin'ilay maoderina, misy ny fihetsika simika izay misy raha tsy bevohoka ny vehivavy.
Araka ny ahitanao ity fitsapana ity dia tena mora tanterahina ary tokony hitahiry vola. Betsaka ny zavatra mila ianarantsika avy amin'ny Egyptianina taloha sy ny fanafody natoraly azy ireo. Hitanay ny dian-kapaoty voalohany amin'ny fimailo manodidina ny 1350 talohan'i JK tany Egypt. Ny fimailo avy eo vita tamin'ny rongony miloko, nopetahany diloilo oliva. Nampiasaina tamin'ny mummies izany tamin'ny embalmers, saingy tsy fantatsika raha noho ny antony masina na firaisana izany. Fantatsika ihany koa ny fimailo vita amin'ny fonontsoran'ny tsinay, indrindra ny areti-mifindra.
Mba hisorohana ny fitondrana vohoka dia matetika ampiasaina ny pilina fanabeazana aizana, izay misy ny hormonina (estrogen) izay heverina fa manakana ny ampahany amin'ny atidoha (ny hipopotama-pituitary complex), ary amin'izany manakana ny fivoaran'ny zaza am-bohoka. Toa takatr'ireo Egyptianina taloha izany satria nampiasa pilina namboarina izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny voa ampongabendanitra ho vovoka, dia nampiasa savoka izy ireo mba hanamboarana kavina kely mifehy. Marina tokoa fa ny voan'ny ampongabendanitra dia misy estrogen voajanahary!
Ary tsy izany ihany. Ny egyptiana koa dia nampiasa menaka izay azo oharina amin'ny spermicides misy antsika ankehitriny. Afangaro amin'ny tantely, daty na akora hafa, fako voay na elefanta no nampiasaina matetika tamin'ny menaka sy menaka notendrena, efa ho 3800 taona lasa izay, nataon'ny dokotera egyptiana. Ny fermentation-n'izy ireo dia nahatonga azy ireo spermicides tena tsara.
- Jereo bebe kokoa: http://sain-et-naturel.com/voici-comment-les-anciens-egyptiens-faisaient-le-test-de-grossesse.html#sthash.i6Uoymfp.SPPT03Z6.dpuf
Ny fananganana lay izay miteraka herinaratra, hazavana, hafanana ary na dia amin'ny Internet
Famoronana sy angano momba ny famoronana (PDF)
Soa azo avy amin'ny menaka moringa amin'ny volo sy hoditra
Ny fehezan-dalàna mistery an'ny piramida - Robert Bauval (PDF)
Hieroglyphs hita tany Aostralia dia afaka nanoratra indray ny tantara